Mety ho lasa «bizina» be io | NewsMada
Mety ho lasa «bizina» be io
Mbola ambentin-dresaky ny rehetra ary mahasarika ny mpanara-baovao eto Madagasikara, eny fa na ireo Malagasy, mila ravinahitra any andafy aza, ny ambalavelona, miseholany ankehitriny. Tsy misy tsy voakasik’izany na lahy na vavy na tanora na antitra, na manankarena na mahantra na avy amin’ny antoko mpanohitra na mpanohana ny fitondrana.
Sahiran-tsaina ny fianakaviana manana ireo mararin’izany. Misedra olana goavana ny fitondram-panjakana amin’ny fitadiavam-bahaolana, hisorohana azy. Miady fo aman’aina ireo mpitondra fivavahana, manohitra ny asan’ny devoly, amin’ireo marary. Mampiasa ny fahaizany ny mpitsabo, hanasitranana ny voan’ny ambalavelona.
Samy manao izay ho afany ny ambanilanitra iray manontolo. Ny tsikaritra aloha, tena sahirana ny fitondrana, manoloana ity ambalavelona ity. Tsy mahita lalan-kivoahana, ary efa manipy “gant”, araka ny fitenin-jatovo azy. Hany ka mampirisika ireo olona voan’ny ambalavelona hanatona ireo mpiandry. Marina izany, Andriamanitra tompon’ny hery sy ny fanasitranana irery no mahavita manasitrana an’io. Tsy misy tsy vitan’ny fahefan’Andriamanitra na inona na inona olana eto ambonin’ny tany.
Ny tena atahoran’ny rehetra kosa nefa, ny hahatonga ity ambalavelona ity ho “bizina” goavambe. Tsy maintsy hisy atsy ho atsy, antokon’olona sy fikambanana, hilaza ho ren-tany ho ren-danitra fa manana ny fanefitra amin’izany, ka hanao “bizina”, hanangonan-karena tampoka.
Tsy vao izao no nisian’izany, fa tsaroan’ny rehetra tsara ilay fitaovana kely entina amin’ny tanana, niadiana tamin’ny fiakaran’ny tosidrà. Maro ny nahazo vola sy tonga mpanefoefo tampoka tamin’ireny. Ankehitriny, nahafongana ny olona tapaka lalandrà sy ny voan’ny “AVC” ve? Ny fahorian’ny sasany tokoa, fanararaotan’ny hafa. Aza manody anie izany.